Sare, Kicin, iyo Fursado Suuq Geyn Fudud Oo Kobcin Ganacsi | Martech Zone
Haddii aad weydiiso dadka badankood halka ay ka helayaan dhagaystayaashooda, inta badan waxaad heli doontaa jawaab cidhiidhi ah. Inta badan xayeysiinta iyo waxqabadka suuqgeyntu waxay la xiriiraan xulashada iibiyaasha safarka iibsadaha… Laakiin taasi miyaa goor hore?
Haddii aad tahay la-tashiga isbeddelka dijitaalka adag; tusaale ahaan, waxaad ku buuxin kartaa dhammaan faahfaahinta xaashiyaha adigoo fiirinaya kaliya rajadaada hadda iyo inaad ku koobnaato xeeladaha aad aqoonta u leedahay. Waad sameyn kartaa baaritaanka ereyga muhiimka ah waxaadna diirada saari kartaa makiinadaha raadinta ee adeegsadayaashaas raadinaya wakaaladda isbeddelka dijitaalka, lataliyaha istaraatiijiyada dijitaalka, shirkadda hirgelinta shirkadda, IWM
U Guuritaanka Baaxadda Safarka Iibsiga B2B
Maahan wax ku saabsan adiga bartilmaameedka dadweynaha. Sidoo kale waxay ku saabsan tahay macaamiishaada hadda jirta, himilooyinkaaga kor u kaca, iyo dhaqdhaqaaqooda hoose.
U soo noqoshada tusaalaha shirkad latalin isbedel dijitaal ah. Haddii shirkaddu hesho maaliyad muhiim ah si kor loogu qaado ururkooda… tallaabo muhiim ah oo ka socota geeddi-socodkaas ayaa maal-gelinaysa is-beddelka dhijitaalka ah. Ama, haddii shaqaalihii muhiimka ahaa lagu dhex qaso urur, hoggaankooda cusubi wuxuu raadin karaa inuu beddelo khibradooda macaamiisha.
Marka, haddii aan ahay shirkad isbeddel dijitaal ah, dantayda ayaa ugu wanaagsan inaan dhiso xiriirro lala yeesho shirkadaha kor u kaca. Tan waxaa ka mid noqon kara:
Shirkadaha Shirkadaha Ganacsiga - u bandhigida macaamiisha VC waxay noqon doontaa hab fiican oo lagu dhiso wacyigelin iyo waxbarida macaamiisha mustaqbalka.
Isku-darka & Shirkadaha Qaadashada - bixinta cilmi baarista iyo waxbarashada shirkadaha M&A ayaa ku habboon. Markay midoobaan oo ay kasbadaan macaamiisha, waxay la kulmi doonaan caqabado si ay udheelaan waaya-aragnimadooda dijitaalka ah.
Garyaqaanada & Xisaabiyeyaasha - mid ka mid ah talaabooyinka ugu horeeya ee ay shirkaduhu qaadaan markay kor u qaadayaan ayaa ah inay la shaqeyso wakiilada sharciga iyo dhaqaalaha.
Shirkadaha shaqaalaynta - Ganacsiyada kor u qaadaya ama ku wareegaya jagooyinka hoggaaminta waxay inta badan la shaqeeyaan xirfadlayaal qorista si ay u keenaan hibo gudahooda.
Ganacsi noocee ah ayaad la wadaagi kartaa kuwa kor uga kacaya macaamiishaada mustaqbalka.
Bixinta Adeegyo Dheeraad ah Macaamiishaada Hadda
Mid ka mid ah farriimaha ugu jahwareerka badan ee laga maqlo macmiilka ayaa ah, "Ma aanan ogeyn in shirkaddaadu ay taas bixisay!" ka dib markaad maqasho warka sheegaya inay qandaraas la saxiixdeen shirkad kale.
Tallaabo muhiim ah oo saaran markabkaaga macmiilkaaga ayaa ah inaad la xiriirto dhammaan wax soo saarka, adeegyada, iyo fursadaha lamaanaha ee ay meheraddaadu siin karto. Sababtoo ah waxaad horey u la laheyd xiriir shirkad, waxaa laga yaabaa inaad horey ugu liis gareysid nidaamyadooda xisaabinta lacag bixinta, horeyba waxay u casaan bixiyeen heshiisyadaada adeegyada… badanaa way fududahay ballaarinta xiriirka aad iyaga la leedahay.
Iskaashi lala yeesho ururada kale ee aad ku kalsoon tahay badanaa fursad weyn oo lagu dhiso qiime iyo xitaa wadista dakhliga. Waxaan leenahay howlo tixraac shirkado badan oo aan ognahay kuna kalsoonahay inay shaqo weyn u qabtaan macaamiisheenna. Waa istaraatiijiyad guuleysata oo loogu talagalay macaamiishaada iyo macaashkaaga gaarka ah.
Maxay yihiin shirkadaha shuraakada ah ee aad taqaanid ee aad ku kalsoon tahay inaad u soo bandhigi karto macaamiishaada? Ma kula jirtaa heshiisyo gudbin ah?
Ahaanshaha Ilaha Hore ee Macaamiishaada Hadda
Ka dib markaan dhammaystirno hirgelinteena macaamiisha, badanaa waxaa la soo xiriiraa bixiyaha softiweerka si ay uga hadlaan shirarka, uga qayb galaan wareysiyada, laguna soo xigto daabacadaha warshadaha.
Sababtoo ah waxaad siisay khibrad aad u fiican macmiilkaaga, qaado waqti aad kula wadaagto iyaga fursadaha dallacaadda. Shirkaddaada xiriirka dadweynaha waa inay ka shaqeysaa sidii ay u heli lahaayeen fursado ay ku hadlaan kooxdaada suuqgeyntu waa inay ka caawisaa iyaga qoraaga inay u maleeyeen maqaallo hoggaamineed oo ku saabsan goobaha warshadaha.
Markay helaan fursadahaas, waa wax dabiici ah in shirkaddaada lagu xuso macnaha guud ee waxyaabaha ay bixinayaan. Sababtoo ah ma shaqeynayaan waayo, adiga ama aadan bixin by adiga, waxay kula hadlayaan dhagaystayaasha sidii maamul iyo saaxiib la aaminay. Noocaas u doodista macaamilku waxay wacyigelin la yaab leh u horseedi doontaa shaqada aad qabanayso.
Sideed u caawin kartaa macaamiishaada si ay kor ugu qaadaan guushooda ay kula wadaagaan? Maxay yihiin ilaha aad ku siin kartid hawshaas si aad ugu baraarujiso ganacsigaaga?
Maxaad ugu deg degaysaa hal meel dhamaan tartamayaashaadu? Ku billow inaad ka shaqeyso kor, ka hoose iyo ka hor macaamiishaada hadda si aad dhaqdhaqaaq badan ugu kaxeyso khadkaaga hoose.
Tags: b2bbrandingekspertensafarka iibsadayaashadesigngunta hoosesuuq geynta hoosemarketing inboundShirarka SuuqgeyntaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinkaapps mobileIsgaadhsiintaiskaashigaxiriirka bulshadaBandhigyada ganacsigakheyraadsuuq geyn kor u kac ahWebinars
Sqribble: Guji, Naqshadeeyo, kuna Daabac Ebook-kaaga, Daraasado Kiis, ama Wargeysyo Daqiiqado ah